Iwebhusayithi Yakho Ebhujisiwe ayifuni Ukuhola | Martech Zone
Iwebhusayithi Yakho Eqhakazile ayikufanelekeli Ukuhola
NgoLwesithathu, Novemba 4, 2009 NgoLwesithathu, Novemba 4, 2009 Douglas Karr
I-TMI = Ulwazi Oluningi.
Amawebhusayithi amaningi akhiwe nge-TMI. Ngingathanda ukubheja ukuthi kunezindawo ezi-5 eziphezulu wonke umuntu azibheka kuwebhusayithi ejwayelekile ngaphezu kwekhasi eliyisiqalo kulezi zinsuku:
Okulandiwe (uma ukuletha)
Izixhumanisi eziya kumaBlogs nakuxhumano lomphakathi
Bengisebenza namakhasimende ambalwa akamuva futhi bengilokhu ngibuyisela emuva kumthamo wemininingwane abanayo kumawebhusayithi abo. Umngani nozakwabo, uKyle Lacy, usanda kubhala lokho ikhwalithi, insizakalo nobuchwepheshe Akukhathaliseki. Uqinisile - ikakhulukazi kuwebhusayithi.
Ngabe ulindele ngempela ukuthi othile akhangise okuhlukile? Mhlawumbe “Yebo, singochwepheshe futhi senza umsebenzi omuhle ngokuhlinzeka ngamakhasimende ethu… kepha izinga lethu liyashoda. Ukulungele ukusayina nathi? ”
Bengihlala ngichaza iwebhusayithi njengesibonakaliso phambi kwesitolo sakho. Kudinga ukuthi yakhelwe kahle, ibe mfushane, futhi iqonde ngqo ephuzwini… ukuvumela abantu abama ukuthi bazi ukuthi wenzani. Kudinga nokuba sendaweni enhle (i-SEO), kepha lokho okunye okuthunyelwe kwebhulogi. Uma uphawu olungaphandle kwesitolo sakho lunamakholomu angama-25 ayo yonke imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezayo, ungafunda ngazo bese ungena? Noma ungahamba?
Amathuba okuthi, ngewebhusayithi enkulu kakhulu, uvimbele ukuhola okuhle ngaphandle kokuthola ithuba lokuzithengisa. Uma ufuna imininingwane imininingwane yakho nokunikezwayo, lelo yithuba elihle lebhulogi. Ngaphandle kwalokho, gcina iwebhusayithi yakho (aka uphawu lwewebhu), kuhlanzekile futhi kufinyelela ezingeni. Angikaze ngiye kuwebhusayithi yamakhasi ayi-100 bese ngithi, “Hawu, lokhu kucophelelwe futhi kuklanywe ngendlela emangalisayo!”. Esikhundleni salokho, mhlawumbe ngilahlekile… angikutholanga ebengikufuna… ngahamba.
Ngena kwi-Web Analytics yakho bese ubala inani lamakhasi ngokuvakashelwa okuningi okufaka i-95% yethrafikhi yakho yezinkampani. Ungamangala (futhi udumazeke unikezwe wonke umsebenzi owenzile kulawo amanye amakhasi). Ngisho nale bhulogi, enamaposi angaphezu kuka-2,100… amakhasi ayi-10 enza i-95% yethrafikhi (kanye nekhasi lokuxhumana is omunye wabo!). Iwebhusayithi yakho kufanele inikeze isithombe esicace bha. Mangaki kulawo makhasi anezilinganiso ezingama-100% zokubuyisa? Bangaki kubo abavakashelwe zero?
Amaklayenti ami ayaqonda, futhi asevele ezuza kulelisu. Iklayenti elilodwa manje selingena ngemvume kwamakhasimende ngethani lemininingwane eyengeziwe ngochungechunge lwamamenyu - kodwa kuphela uma amakhasimende engenile. Elinye linebhulogi lapho lizofaka khona yonke imininingwane eyengeziwe. Amawebhusayithi abawashicilele acacile, amafushane, futhi anobungani ekuguqulweni. Sinikezela ngemininingwane eyanele yemikhombandlela yokuzibandakanya ngokuqhubekayo, kepha akwanele ukuqeda abanye abangahle babe ngamathemba amahle.
Ukulinganisela ngokucophelela. Ungahlinzeka ngemininingwane eminingi ekhasini lewebhu bese uguqula abantu… kepha ngikholelwa ukuthi amakhasi amahle kakhulu agwema uhlu oluningi lwezici nokucaciswa. Bona, esikhundleni salokho, banikeza ubufakazi bamakhasimende, izinzuzo nemiphumela. Gwema ikhwalithi, insizakalo nobuchwepheshe. Esikhundleni salokho gxila ebuhlungwini obulethe isivakashi lapho nokuthi ubasize kanjani abanye ukunciphisa izinhlungu zabo.
Tags: facebook logini-plugin yezenhlaloukungena ngemvume kwezenhlalouphawu lwezenhlaloukungena ngemvume ku-twitter
Izinganekwane ezi-5 Zokuxhumana
I-SEO: Xhumanisa Izilingo Zokugwema
Nov 5, 2009 ngo-2: 42 AM
Lapho sakha kabusha isiza sethu, sanciphisa inani eliphelele lamakhasi, futhi sathuthela okuqukethwe okwedlulele kubhulogi yethu lapho abantu bengakusesha khona uma bekufuna ngempela!
Ithrafikhi eya emakhasini abalulekile inyukile, njengoba nezinga lokubhaliselwe kubhulogi lethu.
Nov 5, 2009 ngo-3: 21 AM
Ngangithengise isikhathi eside. Ukunikeza imininingwane eminingi ngasikhathi sinye kubizwa ngokuthi yi-barfing kukhasimende. Vele ubanikeze okwanele ukuze baqhubeke.
Nov 5, 2009 ngo-11: 54 AM
Okuthunyelwe okuhle uDoug. Ngempela ngibhale okuthunyelwe kwezivakashi mayelana nokugcina iwebhu ilula kuLiz Strauss. Ingqondo enkulu iyinto efanayo. It Kuhlole: http://bit.ly/21dXf2
Kulula kungcono. Iya ngqo ephuzwini kuwebhusayithi yakho.
Nov 5, 2009 ngo-7: 31 PM
Okuthunyelwe kwezivakashi noLiz? Wena bayinkanyezi ye-rock!
Nov 5, 2009 ngo-7: 34 PM
Umqeqeshi wami wokuthengisa uyayibiza kuchitheka uswidi. 🙂 IBarfing ingahle inembe kakhudlwana, noma kunjalo!